Sida loo Play MKV on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah?
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah Guide
1 Stream Video From PC in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
2 Stream Video From Mac in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
3 Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ay taageerayaan Qaabka Media
4 Watch Video on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
MP4 6 Play
Sida loo Play MKV on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Sida dadka intooda badan, waxaa laga yaabaa in aad sidoo kale rajeynaya in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid taageeri karaan faylasha MKV si aad u wanaagsan. Taasi waa sababtoo ah MKV ah waa weel aad u fiican oo leh tayo Blu-ray. Warka wanaagsan waa in Microsoft ayaa soo hagaagay taageerada MKV, si aad isla markiiba sida qaabab kale ee caadiga ah waxaa ku raaxaysan karaan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa laga yaabaa in aad la kulanto kala duwan dhibaato loo maqli karo, sida subtitles ma muuqdaan ama ma furi kartid faylasha oo dhan. Haddii ay sidaas tahay, ha ka welwelin! Wondershare Video Converter siinayaa hab sahlan oo dhakhso ah si ay shaqo u heli sameeyo. Sidoo kale waxaan bixinaa tilmaamo dheeraad ah oo kaa caawinaya in aad ku raaxaysan video on TV, hubi tan >>
Taageerada ilaa 150 qaabab file kala duwan, MKV ka mid ahaa.
Function Media gooya kaa caawinaysaa in aad si toos ah u sii qulquli videos MKV in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Dooro ama si toos ah u soo bixi iyo subtitles socdaan.
Waxaa la dhisay-in downloader online xitaa kaa caawinaysaa in aad ka soo dejisan iyo MKV il toos gudbiyo.
Hawlaha kale ee sida edit, qoraaga iyo gubi DVD.
Hoos waxaa ku qoran tilmaan faahfaahsan oo aad muujinaysaa tallaabo tallaabo-geeddi-socodka oo dhan.
Talaabada 1: samaysay aad Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah qalab
First dhigay ilaa qalab aad iyo aad u hubiso in aad computer iyo Madaxweyne Siilaanyo waa shabakadda isku mid ah.
Talaabada 2: Open Server Media
Video Converter Ultimate Ka mid ah plugin awood loo yaqaan "Media Server", kaas oo lagu rakibi doonaa la socdaan software iyo icon toobiye ah ayaa sidoo kale lagu ahbaa doontaa desktop. Double guji icon in la furo ilaa Media Server, iyo waxa ay si toos ah lagu ogaan doonaa qalabka kabka ka heli karaa shabakada. Xaaladdan oo kale, ka hoose ee suuqa kala hoose dooran Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah.
Talaabada 3: Load files MKV in Server Media
Markaas guji "Add Faylal ay" si ay u dajiyaan files MKV si Media goysaan. Waxa kale oo aad eegi kartaa xulashada Computer si ay si toos ah u heshaan faylasha aad.
Talaabada 4: tuur files MKV in Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Falaarta ku file MKV ah oo aad aragtaan icon loo yaqaan Play on TV. Riix icon iyo daaqad xira curiyo doonaa. Dhowr ilbiriqsi ka dib, waxaad ku raaxeysan kartaa file MKV aad shaashadda weyn. Markaas xakamayn karto loo maqli karo ee uu furmo suuqa, sida qabsato mugga, qabsadaan habka ciyaareed ama ku boodaan si ay u dhacdo hore ama kan ku xiga. Muuqaal kale oo waa weyn yahay in, waxaad riixi kartaa "T" badhanka si ay u doortaan subtitles ama xitaa soo dejisan iyo subtitles la socosho si toos ah.
Sida loo sii qulquli Video ka Mac in TV isticmaalaya Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah
Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah ay taageerayaan Qaabka Media
TiVo vs Comcast, Yaa ku guuleystay Battle DVR ah?
Beddelaan Jabbuuti oo Files Wixii Radidiyaha on Qalabka telefoonada gacanta
iPhoto Alternative for Mavericks
Sida loo abuuro cajiib ah Videos in hab fudud oo
> Resource > Video > Sida loo Play MKV on Madaxweyne Siilaanyo Oo Mid ka mid ah